SONATA-CANTATA: ချို ပေစွ ဟင်းချို
သီတာ ဒီကဗျာလေးကို ခုထိ မှတ်မိနေတာ တကယ် အံ့သြသွားတယ်... အခု အသံထွက်ပြီး ရွတ်ကြည့်နေတယ်... ချစ်စရာလေး...
ခုချိန်မှာ တအူအူ လုပ်ကြည့်ရင် Chicken Rice လောက်တော့ ရမလား မသိဘူး... ဟိ...
ဖတ်စာအုပ်ထဲက ကူးတင်တာပါ သက်ဝေရယ်...
အသက်ကြီးပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းပို့စ်ဆက်တင်ပါမယ်း)
ဟင်းချိုလေးက ကိုယ်တိုင်မစားရတော့ ချိုမချို မသိပါဘူး။ :)
ပျောက်ဆို အခြားဟာတွေဆီ အာရုံ အလည့်ပေးနေရလို့
ဒီက ဘလော့ဂ်ဘက် လှည့်လိုက်ပြီဆို ကမ္ဘာကြီးတောင် မကောင်းတတ်လို့ မေ့မသွားတာလေ...း)
သူများကို မထုံဘူးများ ထင်နေလား
ပရန္န၀ါတွေကို ရိတ်ရိတ်လှီး ဟင်းချိုချက်ပြီး
မျိုလှဲ့ကွဲ့လေး ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တင်လိုက်ရး)
Come and try payannawa soup.I can still recite the poem by heart :D
Don't mean younger than you.
အစ်မပြောမှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်...အိမ်ကလူဟင်းချက်မကျွေးတာ..။ ကိုယ်ကအူဖို့လိုသကိုးလို့..အဟိး))
ွGyidaw ကလည်း အသက်အကြောင်း ထည့်ပြောသွားပြန်ပြီ
တို့တွေ သင်တန်းသွားဖို့လိုရင် အတူတူသွားရအောင်
တအူအူ သင်တန်း ဟိဟိ
တအူအူသင်တန်း အကြိုတက်ထားချင်လို့ပါဗျို့.... :P
ဟိုနေ့က အိမ်မှာ စွယ်တောေ်ရွက်ဟင်းချိုလေးချက်တော့ ခု အစ်မသီတာပြောတဲ့ ချိုပေစွ ဟင်းချိုကဗျာလေး သတိရလိုက်မိသေးတယ်
ဒါပေမဲ့ မသီတာလို လုံးစေ့ပတ်စေ့ မမှတ်မိဘူး တစ်ပိုင်းတစ်စဘဲ ဖြစ်နေတာ
ခု အစအဆုံးဖတ်ရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ
မကြီးသီတာ.. ယုန်ဟင်းချိုကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ ညီမလည်း ဒီကဗျာကို ဆိုရခက်လို့ အစအဆုံး မမှတ်မိဘူး။ ရှေးတုန်းက ဟင်းအရသာပါအောင် ဝါးပြာထည့်ကြတယ် ထင်တယ်နော်။ ဆားရှားတုန်းမို့ နေမယ်။
ကိုညိမ်းနိုင်ကော်မန့် ဖတ်ပြီး မြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတယ်။
ကဗျာလေးကို အခုမှ ပြန်ခံစား ကြည့်နေတယ်...၊ တချို့ မိဘတွေက 'ဟဲ့..ဟိုအကောင်၊ ဒီမှာ လာမျိုလှည့်' လို့ ပြောတတ်ကြတာ ကလေးတွေက တအူအူ အလုပ်များ သွားလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်....။းD
ဟားဟား ရယ်လိုက်ရတာ သီတာရယ်....ခုမှပဲ တို့လည်း တအူအူ လုပ်ဖို့လိုမှန်း သိတော့တယ်....။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ချည်းပဲ ချက်ကျွေးနေရ၊ သူချည်းပဲ မြိုနေရတာကိုးးးးး
ကိုညိမ်းနိုင်ကို ကိုဧရာက ထောက်ခံနေတာ...
ပူဆာနိုင်လွန်းလို့ ခိုင်းနှိုင်းတင်စားလိုက်တာ ဆိုပဲ
ရွှန်းမီ၊ ကိုညီလင်းသစ်၊ ချစ်ကြည်..
မန်းလေးသားဖြစ်ပေမဲ့ အပြောမတတ်ရှာလို့ပါအေ လို့ ခွင့်လွှတ်ပြီး တွယ်ပလိုက်မှာပဲ
ချက်ကျွေးရင် ပြောပါတယ်... :)
အဲ့လို ကဗျာလေးတွေ ပို့စ်တင်ပါဦးမယ်နော်
ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး သဘောကျနေတာ။ ရှေးကကဗျာတွေပြန်ဖတ်ချင်နေတာြဲကြာပြီ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
မမသီတာရေးတဲ့ ကောက်ချက်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးစိစိဖြစ်သွားသေးတယ်... ။ :)
မဲဝဲလ်ကြောင့် ဘလော့ဂ်လစ် ဖြုတ်ထားရတော့
ခုမှပဲ... ကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး အောက်ကကော်မန့်တွေနဲ့ပဲ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်လိုက်တယ်။
တအူအူကို ဝါကျဖွဲ့ဖို့ စာသားအသစ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါကြောင်းးးး :D
2 Jun 11, 15:37
seeseinshinss: ယုန်သားတော့ မန်းမှာရသေးတယ်
2 Jun 11, 15:40
S-C: အင်း မျက်မှန်ပါဝါ တိုးနေလောက်ပြီ...ဘလော့ဂ်တမျက်နှာပဲ ကြည့်တာဆိုတော့ စစ်မကြည့်သေးဘူးး)
2 Jun 11, 15:54
seeseinshinss: ဘလော့တမျက်နှာ ပဲကြည့်လို့ကတော့ ဦးအာရေ ကစိတ်ဆိုးနေပြန်အုံးမယ်
2 Jun 11, 16:09
2 Jun 11, 17:08
S-C: စည်းစိမ်ရေ...အဲ့ခါကျ...လူရွှင်တော်တွေ ပြောသလို...နန်းမြို့ရိုးမှာ လေးမျက်နှာ...ဆယ်ပြားစေ့မှာ နှစ်မျက်နှာ...မေ့ရင်ထဲမှာ တစ်မျက်နှာ...ဟော့ဒီ မျက်နှာ.. ဒီမျက်နှာ လို့ ပြောလိုက်မှာပေါ့းP
2 Jun 11, 18:20
seeseinshin: ဖွဘုတ်က တမျက်နှာ တွီတီက တမျက်နှာ ဘလော့က တမျက်နှာ မျက်နှာများတဲ့ ဒေါ်သီတာ
seeseinshin: ဦးအာရေက တမျက်နှာ
2 Jun 11, 19:36
S-C: ဦးအာရေ :)
2 Jun 11, 19:37
S-C: မသီတာ :glad: :D :biggrin: :lol: :P
2 Jun 11, 22:24
seeseinshin: အာကြီးလိုတော့ သွားမခေါ်နဲ့နော် တုတ်ကြီးကြီးနဲ့ တီးလို့ကတော့ စစနဲ့မဆိုင်
2 Jun 11, 22:25
seeseinshin: ဦးအာကြီး တော့ သွားမခေါ်နဲ့နော် တုတ်ကြီးကြီးနဲ့ တီးလို့ကတော့ စစနဲ့မဆိုင်
3 Jun 11, 10:51
S-C: စစရေ...အဲ့လိုဆို မသီတာကို စကားမပြောပဲနေမှဖြင့် ဒုက္ခ ...
3 Jun 11, 11:22
S-C: ပို့စ်များ တနေ့တပုဒ် ဆိုသလို မှန်မှန်ကြီး တင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်... ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့)))
3 Jun 11, 19:28
seesein: တနေ့ ၂ပုဒ် ၃ပုဒ်တင်ပေးလဲ စိတ်မဆိုးကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်း)
3 Jun 11, 22:17
အပြံးပန်း: မသီတာရေ၊ ရောက်စ်
3 Jun 11, 22:22
S-C: အပြုံးရေ... :)
3 Jun 11, 22:52
seesein: my sis, i wanna ur email. pls
3 Jun 11, 23:01
S-C: sonata.cantata@gmail.com ပါ စစရေ...
4 Jun 11, 14:10
seesein: thanksalot, i like your writing style.